Dad American Ah Oo Ku Dhintay Shil Diyaaradeed. – Calamada.com
Dad American Ah Oo Ku Dhintay Shil Diyaaradeed.
calamada February 16, 2019 2 min read
Saddex Ruux oo Mareykan ah ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay mid ka mid ah gobalada uu ka koobanyahay dalka Kenya
Sida ay sheegeen illo ka tirsan booliska dalka Kenya, diyaarad kuwa yar yar ah ayaa ku burburtay gobalka Rift –Valley ee ku yaalla dalka Kenya maalintii Arbacadii ee La soo dhaafay, waxaana ku dhintay shilkaasi diyaaradeed ku dhawaad ilaa Shan Ruux oo Saddex ka mid ah ay tahay Saliibiyiinta Mareykanka .
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ay arkeyn diyaarada oo si deg deg ah ugu soo daganaysa garoon beyr ah aan loogu talagalin, kaasi oo ku yaalla deegaanka Kericho oo dhaca galbeedka magaalada Nairobi.
Sida laga soo xigtay booliska Kenya dadka dhintay ayaa waxa ka mid ahaa duuliyihii diyaarada oo u dhashay dalka Kenya iyo 3 American ah, iyadoona ilaa iyo hada aan la ogaan halka ay ka soo jeedaan dadka kale ee ku dhintay shilkaasi.
Joseph Neg-eed, oo nin ka shaqeeya beerta ay ku soo dhacday diyaarada ayaa sheegay in diyaarada marka hore burburisay geedo ku yaallay beeyrta ay ku soo dhacday, waxaana uu intaasi ku daray markii danbe ay soo dhaceen taayarada danbe ee diyaarada, kadibna ay gilgilatay , ugu danbeeytiina ay burburay diyaarada gabi ahaanteeyda.
Ha’adda duulimaad rayidka ee dalka Kenya ayaa sheegtay in markii ay burburtay diyaaradasi ay koox gurmad ah ay u direen goobta ay diyaaradu ku dhacday, si ay u baaraan sababta shilka keenay iyo khasaaraha ka dhashay.
Dadka Americaanka ee ku dhintay shilkaasi diyaaradeed ayaa lagu kala sheegay nin iyo laba Haween ah, waxaana dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in ay maqlayeen markii ay diyaarada soo dhaceysay codadka iyo qaylada dad reer galbeed ah oo dyaarada la socday.
Sanadkii la soo dhaafay ayay aheed markii Sideed Ruux oo Rakaab ah Labo duuliyaal ah ay dhinteen kadib markii ay burburtay diyaarad ay la socdeen oo ku sii jeeday magaalada Nairobi ee caasimada dalka .
Previous: Sarkaal Iyo Askar American Ah Oo Lagu Dilay Garoonka Balidoogle.
Next: Qarax Ka Dhacay Degmada Hilwaa Ee Muqdisho.